KHILAAF: Dhawr Maalmood Ka Hor Finalka Europa League, Chelsea Oo Khilaaf Ka Dhex Abuurtay Arsenal & Petr Cech. - Gool24.Net
Dhawr maalmood oo kaliya ka hor finalka UEFA Europa League ee kooxaha Chelsea iyo Arsenal ku dhex mari doona caasimada Baku, waxaa soo baxay khilaaf iyo walwal cusub oo ay Blues ka dhex abuurtay Gunners iyo goolhaye Petr Cech.
Waxaa soo baxay war sheegaya in Chelsea ay dalab u soo gudbisay goolhaye Petr Cech si uu kooxdeeda ugu noqdo agaasimaha ciyaaraha, waxayna taasi keentay in jamaahiirta Arsenal ay dalbadaan in Cech aanu ciyaarin kulanka Blues ee finalka Europa league.
Jamaahiirta Gunners ayaa walwal ka qaaday in Petr Cech uu waqtigan xaasaasiga ah aqbalay dalab uu ku noqonayo shaqaale kooxda Chelsea ah taas oo ay u arkeen in ayna waqti fiican ahayn.
Laakiin goolhaye Petr Cech ayay qasab ku noqotay in uu arintan ka hadlo si uu xaalada u dajiyo wuxuuna beeniyay in uu jiro wax heshiis ah oo uu Chelsea la gaadhay.
Goolhaye Petr Cech ayaa fariin uu bartiisa twitterka ku soo qoray waxa uu ku cadeeyay in aanu wali wax go’aan ah gaadhin balse kadib finalka Europa league uu mustaqbalkiisa go’aan ka qaadan doono.
Goolhaye Petr Cech ayaa xili ciyaareedkan Gunners goolka ugu soo jiray kulamadii Europa League wuxuuna doonayaa in ayna arintan soo baxday wax saamayn ah kaga yeelan.
Fariinta uu Petr Cech kaga jawaabay warka soo baxay ayuu ku yidhi: “Inkasta oo uu maanta war soo baxay, sidii aan horeba u sheegay waxaan go’aan ka gaadhi doonaa mustaqbalkeyga ka dib kulanka ugu danbeya (finalka Europa League). Waqti xadirkan diiradeyda oo dhami waxay saaran tahay inaan Arsenal la qaado Europa League.”
Uani Emery iyo kooxdiisa Arsenal oo hore u waayay adeegii Mkhitaryan oo dhibaatada siyaasada ee u dhexayasa Armenia iyo Azerbiajan aan finalka u ciyaari doonin ayaa markale la kulmay arin kale oo shaki galisay Petr Cech.
Si kastaba ha ahaatee, in uu soo baxay warka sheegaya in Chelsea ay dalab shaqaalaysiin ah u samaysay Petr Cech ayaa jamaahiirta Gunners ku qasbay in ay dareenkooda ka dhiibtaan in danaha Petr Cech ee Chelsea ay saamayn kooxdooda Gunners kaga yeeshaan finalka Europa League.